Semalt: 3 Amasu okuMisa ukugaxeka nokuthuthukisa ukusebenza kwakho
Kukhona amaqhinga amaningi abantu abasebenzisa ukuze okuqukethwe kwabo kuphawulwe ku-intanethi. Kukhona labo abakholelwa ukuthi indlela yodwa abangathola ngayo izethameli ukuba banakekele ngokubaphazamisa njalo. Iningi le-spammers ngokuvamile linomqondo onjalo. Bakholeka lokhu kusuka kulabo abathengisi nabathengi asebenzise amashumi eminyaka manje - navy blue and cream hats. Babevame ukwenza umsindo okwanele okhokhelwa isikhathi se-TV, kanye nezikhala zemagazini, umuntu ekugcineni uzozibona. Isu sinesici esisodwa:
Akekho ofuna ukukhathazeka ngezinto abangazange bazicelele noma imilayezo engafaneleki kubo. Impahla ebaluleke kunazo zonke abantu abanayo kuleli zwe elimatasa yisikhathi. Noma kunjalo, kuneziblogu eziningi, abalobi, nabakhangisi abazama ukutholwa ngokusebenzisa le nqubo yokuphazanyiswa nsuku zonke. Kubo, indlela kuphela abantu abazoyilalela uma beqhubeka bekhuluma. Yebo, kukhona amathuba amaningi abazokwenza, futhi uma ukhona phakathi kwalawo macebo, kufanele ume. Kuyinto ecasulayo kakhulu kithi sonke.
UMichael Brown, onguchwepheshe ophakeme uSemalt , uqinisekisa ukuthi indlela engcono yokuqaphela ukuyeka ukwenza umsindo nokwakha isiteji okuzokwenza abantu babone.
Izinto ezintathu okudingeka uzizwe
"Ukukhangisa Imvume," nguSeth Gordon yincwadi ekhuluma ngezinto ezintathu ezibalulekile ukuthi yonke imilayezo efanele ukufundwa kufanele ibe nalokhu: ukulindela, ukufaneleka, kanye nendlela yomuntu siqu. Wonke oxhumana naye ufisa ukuba nezilaleli ezithunjiwe. Kodwa-ke, indlela yodwa yokwazi ukuthi abantu bayathandwa yini into eniyinikezayo uma bekuvumela ukuba ulethe. Konke namuhla kusebenza ngemvume. Isibonelo, izinto ezivamile ezifana nokubhalisela isevisi, ukuhleleka amaphakheji, noma ngisho nokulindela idethi nomuntu, konke kunento oyilindele kusukela uvumele othile ukuthi akuthumele umlayezo.
Ukulindela kubalulekile ngoba kubonisa ukuthi ukhathalela kangakanani umlayezo othize. Uma izilaleli zingakhathaleli okuqukethwe kwayo, akunandaba ukuthi zingase zizwakale kanjani. Labo bantu ngeke bafune ukulilalela. Okufanayo kuya kwimilayezo abayibona engabalulekile kubo noma labo abangazibandakanyi ezingeni lomuntu siqu.
Kumelwe ube mncane
Izwe namuhla lihlangabezana nokuncintisana okuningi nomsindo, wonke umuntu ofuna ukuphawula noma ukuzwa. Ngakho-ke, kusho ukuthi ungase uzibeke engozini ngokuzwakalayo ngokujwayelekile uma ungahambisani nesimo sakho semakethe ethile emakethe. Abantu abanesithakazelo ku "evamile" futhi. Wonke umuntu ufuna okuthile okujwayelekile, into ethi "eyinqaba"..
Amabhulogi, nanoma yiluphi olunye uhlobo lwesikhulumi, likuvumela ukuba uqalise izinto ezintathu ezixoxwa kulokhu okuthunyelwe. Nika abantu indlela yokubhalisa, unikeze umlayezo oxhuma, bese usebenzisa isitayela esiyingqayizivele.
Abantu kufanele baqonde ukuthi leso sakhiwo singasidinga isikhathi esiningi kanye nezimvume eziningi. Kodwa lo mbono awunakwenzeka. Kudinga umzamo owodwa kuphela.
Konke mayelana nemvume
Nasi uhlu lwezinyathelo ezine ezilula ongazisebenzisa ukudala isiteshi abantu abazokhathalela ukuphendulela futhi bazinakekele:
1. Melana nesilingo sokuphazamisa. Lokhu kufaka phakathi noma yikuphi ukuzamazama ukukhamuluka, ukumemeza, noma ukucela ukuzwakala. Enye indlela ngokusebenzisa ama-bots ogaxekile ngokuphindaphindiwe ukuthumela imilayezo yogaxekile ngethemba lokuthi umsebenzisi uzokuchofoza kusixhumanisi esinikeziwe esiholela ekhasini lomthumeli.
2. Qala ngalokho oyaziyo. Noma ngabe ukuphi, sebenzisa ukwakha isisekelo sesikhulumi, futhi njengendlela yokwabelana ngolwazi lwakho.
3. Nikeza abantu ithuba lokulalela. Uma ungenalo enye indlela lapho uthola ukunakwa komuntu, yenza ngokuthembeka, futhi ngenhlonipho enkulu.
4. Vula izithameli zakho ngento ephawulekayo. Uma uthola ukunakekelwa, ungachithi lelo thuba. Khombisa ithalenta yakho, futhi uma ungakwazi, ukuphikisa izinkinga bese udlula izilindelo zabo.
Yiqiniso, wena unenketho yokungazinaki lezi zeluleko futhi ugxilise izandla zakho emoyeni enethemba lokuthi othile uyazisola. Ungase uthole ngisho nabantu abambalwa abakunake. Inkinga yukuthi lapho bethola okuthile okuphazamisayo kunakho, bazokhohlwa ngalokho okufanele unikele.
Khumbula njalo ukuthi indlela oyinqola ngayo izethameli ukuthi uzodinga kanjani ukuyigcina. Uma kungenxa yokuphazanyiswa, khona-ke kuzomele uphazamise lezo zethameli uma nje unento yokuveza, futhi wena, noma izethameli zifuna lokho.
Indlela kuphela ongayithola ngayo ukunakekelwa okuqhubekayo kokuqukethwe kwakho kungukuthi uyithola. Bonisa phezulu, cela imvume, futhi ukhulule. Zonke ezinye izinqubo manje ziyihlazo futhi ngeke zilandelwe ekugcineni.